Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 15/11/2020)
Isikhokelo esithetha isiNgesi siya kudibana nawe Iinanhostele ihostele kwidolophu yakudala ye 2.5 iiyure’ uhambo lokuhambahamba ujikeleze iPrague. Uya kuqalisa ukhenketho lokuhambahamba kwisikwere esidumileyo saseKapa, qhubeka uye kwi-icon yeCharles Bridge. Ukusuka kwiziko labakhenkethi ukuya kwiindawo ezilungileyo zesixeko sasemini neziselo, I-Prague's do's kwaye ayenzi, Uya kulugqiba uhambo ngeetoni zeengcebiso kunye namabali ongasoze ufunde ngawo kwiincwadi zesikhokelo.
Ukhenketho lokuqala lwaseBerlin lokuhamba simahla yeyona ndlela yokufumana imbali yesixeko, Iimpawu zomhlaba, kunye nokuqaqamba kwiiyure ezimbalwa. Luhambo olukhulu lokuqalisa ukuya kwesinye sezona zixeko zihle eJamani, ngembali etyebileyo, and politics.
Ukongeza kwiimbali eziphambili, IBerlin ibonelela ngeekhenketho ezahlukeneyo eziza kubonisa iBerlin ivela kwii-engile ezahlukeneyo; ubugcisa, ukutyazana, okanye iziselo’ phakathi. kutyelelo lwasimahla lwedolophu yaseBerlin, uza kutyelela 6 kweempawu eziphambili zeBerlin, kwaye uve malunga namabali angasemva kodonga nenkcubeko yaseBerlin.
IVenice sesinye sezona zixeko zincinci zincinci e-Itali. Na lyo line, Kulula kakhulu ukulahleka xa uzula-zula kwiindlela zayo ezimxinwa kwaye izakhiwo omangalisayo. I-Venice yasimahla yokuhambahamba kwesixeko iya kukukhokelela kwimbali, isiko, art, Uyilo loyilo kwi 2.5 ukhenketho lweeyure. Isikhokelo esithandekayo uSimona siza kukuxelela konke malunga nesixeko, kwase, kunye neendawo zothando.
Zurich ukhenketho lokuhamba simahla ngu 2 iiyure ezinde kwaye ihamba yonke iMigqibelo ukusuka eParadeplatz, kwaye akukho mfuneko yokubhalisa.
Ngaba ufuna ukufaka i-post yethu yeblogi "I-7 yeeNdwendwe ezihamba ngokukhululekileyo eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-free-walking-tours-europe%2F ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#traveleurope #walkingtours citywalkingtourseurope Europefreewalkingtours train Travel umhambi UkutyaPrague TravelToAmsterdam TravelToParis